LSR & RUBBER KUUMBISA - Chapman Technology Co, Ltd.
Yedu yemvura silicone yerabhuru yekuumba maitiro inogadzira tsika prototypes uye magumo-kushandisa zvigadzirwa zvekugadzira mumazuva gumi nemashanu kana zvishoma. Isu tinoshandisa aruminiyamu anoumba ayo anopa mutengo-unoshanda zvishandiso uye nekumhanyisa zvigadzirwa zvekugadzira, uye stock akasiyana mamakisi uye durometers yezvinhu zveLSR.
Sei Liquid Silicone Rubber paaivaumba Work?
Kuumbwa kweLSR kunosiyana zvishoma kubva kune thermoplastic jekiseni kuumbwa nekuda kwekuchinja kwayo. Kufanana neyakajairwa aruminiyamu chishandiso, LSR kuumba chishandiso chakagadzirwa uchishandisa CNC machining kugadzira yakakwira-tembiricha chishandiso chakavakirwa kuti chidzivirire iyo LSR kuumba maitiro. Mushure mekugaya, chishandiso chakakwenenzverwa neruoko kumutengi maratidziro, ayo anotendera matanhatu akaenzana pamusoro pekupedzisa sarudzo.
Kubva ipapo, chishandiso chakapedzwa chinoiswa mune yepamusoro LSR-yakatarwa jekiseni kuumbwa muchina iyo yakanyatsogadzirirwa kudzora kwakaringana kwepfuti saizi kuburitsa inowirirana LSR zvikamu. PaProtolabs, zvikamu zveLSR zvinobviswa pamaforoma, sezvo mapini ejekiseni anogona kukanganisa mhando yemhando.
LSR zvinhu zvinosanganisira zvakajairwa silicones uye chaiwo mamakisi kuti akwane akasiyana chikamu chikamu kunyorera uye maindasitiri senge ekurapa, mota, uye mwenje. Sezvo LSR iri thermosetting polymer, mamiriro ayo akaumbwa anogara zvachose- kana achinge amiswa, haigone kunyungudika zvakare senge thermoplastic. Kana kumhanya kwapera, zvikamu (kana yekutanga sampuro inomhanya) zvakaiswa mubhokisi uye kutumirwa munguva pfupi inotevera.